Pedometer For Walking For APK Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ရယူပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » ကျန်းမာရေး & Fitness Apps ကပ » လမ်းလျှောက်သည် pedometer
Walking APK သည် Pedometer
သင်ပိုမိုလမ်းလျှောက်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုယူခြင်းအားဖြင့်တစ်နေ့လျှင်သင်နေ့စဉ်အကြံပြုသောအဆင့် ၁၀၀၀၀ ကိုရောက်ရှိနေပါသလား။ အသစ်တစ်ခုကိုခြေလှမ်းကောင်တာ & လမ်းလျှောက် app ကိုများအတွက်စိတ်ဓာတ်ထဲမှာ? ၎င်းကိုအဆင့်ဆင့်ပြီး Android အတွက်ရိုးရှင်းသောတိကျသောတိကျသော Pedometer အက်ပလီကေးရှင်းကိုယခု download လုပ်ပါ။
အခမဲ့နှင့်အစစ်အမှန် pedometer ရယူပါ။ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရာတွင်အကောင်းဆုံးကူညီမှုဖြင့်ဘဝနှင့်သင့်တော်ပါစေ။ သင့်ရဲ့ကယ်လိုရီတန်ပြန်စစ်ဆေးနှင့်အာဟာရချိန်ခွင်လျှာ။
Pedometer Step Counter သည်ကျန်းမာရေးနှင့်ကြံ့ခိုင်မှုအတွက်သင့်တော်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်၏ဘက်ထရီကိုမသတ်ဘဲသင်၏ခြေလှမ်းများကိုနေ့စဉ်ရေတွက်သည့်ရိုးရှင်းသောနှင့်တိကျသော pedometer ဖြင့်သင်၏ကျန်းမာရေးနှင့်ကြံ့ခိုင်မှုရည်မှန်းချက်များကိုပြည့်မီပါ။
step counter သည်သင်၏လက်ကိုင်ဖုန်းပေါ်တွင်အဆင့်များ၊ လောင်ကျွမ်းသောကယ်လိုရီများ၊ အချိန်နှင့်အကွာအဝေးတို့ကိုရေတွက်သည်။ ၎င်းသည်သင်အစားအသောက်၌ရှိနေစဉ်သို့မဟုတ်ပုံသဏ္getာန်ရလိုလျှင်အသုံးပြုသူနှင့်သက်ဆိုင်သောအင်္ဂါရပ်များဖြစ်သည်။
ometerPedometer app အင်္ဂါရပ်များ
★ ON / OFF အပေါ်သတိပေးချက်သတိပေးချက်များ
★အရှိန် / အရှိန်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်း (အရှိန်အဟုန် (သို့) မြန်နှုန်း)
★သင်၏လုပ်ဆောင်မှုအသေးစိတ်အချက်အလက်များထောက်ပံ့ပေးသောတိကျ။ အခမဲ့ခြေလှမ်း tracker
★သတိပေးဘားတွင် pedometer ကျန်းမာရေး app ၏အသုံးဝင်သောကောင်တာသည်သင့်အားတိုးတက်မှုကိုသတိပြုမိစေသည်
★ဤ pedometer သည်အကွာအဝေးကိုကီလိုမီတာနှင့်မိုင်အကြားတွင်ရှိသည်။ သင့်ကိုယ်အလေးချိန်အတွက်မည်သည့်အတိုင်းအတာယူနစ်သည်သင့်အတွက်ပိုသင့်တော်သည်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်
အားလုံး features တွေ 100% အခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ သင်သည်ထိုသူတို့အဘို့အပေးဆောင်စရာမလိုဘဲအားလုံး features တွေကိုသုံးနိုင်သည်။
❤ ၁၀၀% ပုဂ္ဂလိက
အဘယ်သူမျှမနိမိတ်လက္ခဏာကို-in ကိုလိုအပ်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာစုဆောင်းသို့မဟုတ်တတိယပါတီများနှင့်အတူသင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုဝေမျှတာပါ။
အစီရင်ခံစာဂရပ်များသည်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအများဆုံးသောသူများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်သင်လမ်းလျှောက်နေသည့်အချက်အလက်များကိုခြေရာခံရန်လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ သင်၏နောက်ဆုံး 24 နာရီ၊ အပတ်စဉ်နှင့်လစဉ်စာရင်းများကိုဂရပ်များ၌စစ်ဆေးနိုင်သည်။
တိကျမှန်ကန်တဲ့ခြေလှမ်းတန်ပြန်ရှာဖွေနေပါသလား သင့်ရဲ့ pedometer လွန်းပါဝါကိုသုံးပါပါသလား
ကျွန်ုပ်တို့၏ခြေလှမ်းကောင်တာကိုသင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အရှိဆုံးတိကျမှုတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်လည်း pedometer ချွေတာတဲ့ဘက်ထရီဖြစ်ပါတယ်။ ယခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေလှမ်းတန်ပြန်ရယူပါ!
ကျနော်တို့အမျိုးမျိုးသောတိုးတက်မှုစေပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် app ကို facelift ဖြင့်တင်ပြခွင့်ရသည်။
မင်းတို့ကြိုက်တဲ့ version ကိုမင်းကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
18.00 ကို MB